डा. केसीको समर्थनमा सुर्खेतका डाक्टरहरु पनि आन्दोलित - Bulbule Khabar
डा. केसीको समर्थनमा सुर्खेतका डाक्टरहरु पनि आन्दोलित
सुर्खेत, २६ साउन ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागमा समर्थन जनाउँदै सुर्खेतका डाक्टरहरु पनि आन्दोलित भएका छन ।
केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा कार्यत डाक्टरहरुले दुईदिन देखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरामीलाई उपचार गरिरहेका छन ।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखी डा. केसी अनशनको १७ औ दिनसम्म पनि सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन । उनीहरुले तत्काल डा. केसीले उठाएका जायज मागहरु पुरा गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्न समेत माग गरेका छन ।
डाक्टरहरुको आन्दोलनको अगुवाई गरेको नेपाल मेडिकल एशोसियसन शाखा सुर्खेतले डा.केसीको माग तत्काल पुरा गर्न आग्रह गरेको छ ।
एशोसियसनले विज्ञप्ती मार्फत सरकारले माग पुरा गर्ने तिर ध्यान नदिदा अन्सनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एशोसियसनका सचिव डा. नवराज केसीले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखी ११ पटक अनसन वस्दा पनि राज्य उदासिन हुनु दुखको कुरा भएको बताउनु भयो । डा. केसीको जीवन रक्षार्थ आवश्यक कदम नचालिए केन्द्रको निर्णय अनुसार सुर्खेतमा पनि स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारी कडा कदम चाल्न वाध्य हुने उहाँले विज्ञप्ती मार्फत उल्लेख गर्नु भएको छ ।
विज्ञप्तीमा आफुहरुको आन्दोलनवाट सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति दुख पकट गदै डा. केसीले उठाएका मागहरु पुरा गर्नको लागि गम्भिर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २६, २०७४ 5:38:11 PM
Prevक्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा आइसियु सेवाको समुद्घघाटन
Nextप्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ नेपाल एमयु द्वारा ध्यानाकर्षण